ऊ एउटा सानो जस्ताले छाएको टहरामा बस्छे । उसका कोठाभित्रका प्रायः सबै क्रियाकलापहरू मेरो कोठाको झ्यालको सिसाबाट छर्लङ्ग देखिन्छ । आज पनि बिहान उठ्नासाथ झ्यालको पर्दा उघारेँ । उसको कोठा नहेरुँ भन्दा पनि जबरजस्ती देख्नु परिहाल्छ । सानी नौ महिनाकी छोरीलाई खाटमा सुताएर अलि ठूलो छोरो लिएर ऊ कतै काम गर्न निस्किएकी हुनुपर्छ । कोठामा त्यही सानी नानी मात्र मस्त निदाइरहेकी म देख्छु ।
अकस्मात एउटा नमीठो सम्झनाले मेरो मुटु नै चिमोटे जस्तो हुन्छ । पर्दा उघारुँ कि बन्द गरुँको दोसाँधमा म पर्छु । आज रातभर राम्ररी निद्रा नलागेर भएको छटपटीले गर्दा उसको त्यो जबरजस्ती प्रदर्शित हुने कोठालाई म कसरी नदेखेजस्तो गर्नु भन्ने उकुस–मुकुसले विगत ६ महिनादेखि आजसम्मका कुराहरू सम्झन बाध्य हुन्छु ।
ऊ बस्ने टहरोलाई म एउटा सामान्य कोठाको रूपमा भन्दा पनि एउटा चरम रूपले श्रम शोषण हुने नमूना गृहको रूपमा लिन्छु । त्यो कोठामा बस्नेले घरबेटीलाई महिनैपिच्छे भाडा गनेर बुझाइरहनु पर्ने झन्झट छैन । तर दिनका हरेक पलपलमा आफ्नो श्रम घरका सबै मान्छेका सेवामा दान गर्नुपर्छ । यहाँको अकाट्य नियम नै भने हुन्छ यसलाई । कथित हिटलरले निर्माण गर्न लगाएको ग्याँस च्याम्बर जस्तै यहाँ बस्न आउने हरेक श्रमिकहरूका लागि यो टहरो पनि श्रम शोषण च्याम्बर जस्तै छ । कोठाको वास्ताविक बहाल भन्दा सयौँ गुणा बढी मूल्यको श्रमदान गरेर आजित भएपछि कतिले यो च्याम्बर छोडेर कुलेलम ठोकेका छन् भने कतिले यही सहादत प्राप्त पनि गरेका छन् । यसरी वीरगति प्राप्त गर्नेको शव उठाउने खर्च नभएर निःशुल्क शव वाहनको व्यवस्था गर्नु परेको तीतो यथार्थ पनि मेरा अगाडि ठिङ्ग उभिएकै छ ।
आजभन्दा करीब ६ महिना अगाडि यो टहरो अकस्मात् खाली भयो । यसले घरबेटीलाई नराम्रो आघात पुर्‍यायो । आफ्नो घरको कामको लागि एउटा सिन्को पनि भाँच्न नसक्ने यो परिवारका ८/९ जना व्यक्तिहरूको लागि यो भन्दा ठूलो विपत्ति अरु के नै हुन्थ्यो र । टहरो भरिएको बेला घरबेटीहरू बिहानदेखि राती १२ बजेसम्म भोज र पार्टीमै व्यस्त हुन्थे । घरको आँगन विभिन्न किसिमका सवारी साधनहरू कार, ट्याक्सी, पजेरो, प्राडो, मोटरसाइकल, स्कुटर आदिले भरिभराउ भएको हुन्थ्यो भने राष्ट्रकै ठूला तथा सम्माननीय पदाधिकारीहरू, नेता, पत्रकार तथा साहित्यकारहरूको जमघट हुने गर्थ्यो । घरका व्यक्तिहरू पनि सबै उच्चस्तरका सरकारी कार्यालयमा जागिरे छन् । कोही राजनीतिज्ञ भने कोही पत्रकार छन् । उनीहरू प्रायः वर्षको एक/दुई पटक युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया जस्ता विश्वका आधुनिक र चरम विकसित राष्ट्रहरूको भ्रमणमा निस्कने गर्छन् । यी घरका महिला, पुरुष सबै समानताको दृष्टिकोणले सबै क्षेत्रमा समान रहेको आभाष हुन्छ । महिलाहरू शिक्षित, आधुनिक र सम्भ्रान्त भएको घर नेपालमा सायद औंलामा गन्न सकिने मात्र छन् होला जस्तो मलाई लाग्छ । त्यसैले यति आधुनिक र सम्भ्रान्त परिवारको नजरमा हामी सामान्य मध्यम वर्गका मान्छे भुसुनो बराबर नै ठहरिन्छौँ । त्यसैले उनीहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध कोठा भाडा बुझाउने र सामान्य हाई हेलोमा सीमित रहेको छ ।
यही खतरानाक टहरोसँग पौठेजोरी खेल्न र हरेक चुनौतिहरूका पहाड छिचोल्न आजभन्दा करीब ६ महिना अगाडि ऊ यहाँ बस्न आइपुगेकी हो । विचरीलाई के थाहा यहाँका आकाट्य नियमहरूको बारेमा । कि थाहा पाएरै पनि बाध्यताले आएकी हो कि त्यो मैले आजसम्म बुझ्न सकेकी छुइनँ ।
एकदिन बिहानै बग्रेल्ती सामानहरूले टहरो खचाखच भरिएको देखँे । कुन चाहिँलाई दुःख पाउन लेख्या र’छ फेरि भन्ने मन मनमा सोच्दै मुकदर्शक भएर टहरोभित्रको क्रियाकलाप हेरिरहेँ । असरल्ल सामानहरू मिलाउन भित्र–बाहिर गर्दै एउटी २६/२७ वर्षकी लरक्क परेकी महिला पिठ्यूँमा २/३ महिनाको बच्चा च्यापेर हस्याङ्फस्याङ् गर्दै गरेको देखेँ । आफैँ काम लगाएर खाने जस्तो जीउडाल र बान्की परेकी त्यो भर्खरकी सुत्केरीले यो घरको सारा बुहार्तन कसरी पार पाउन सक्ली भन्ने सोचेर धेरै पिरिएँ ।
सामानहरू मिलाएर अलि ठूलोचाहिँ छोरालाई स्कुल पुर्‍याउन ऊ त्यसरी नै अतासिंदै बाहिरिई । म पनि आफ्नो काम गर्न लागेँ । अलि सन्चो नभएकोले त्यसदिन अफिसबाट बिदा लिएकी थिएँ । दिउँसो नुहाएर घाम ताप्दै गर्दा ऊ पनि बच्चालाई तेल लगाउन म बसेकै नजिक आई । सोधखोज गर्दै जाने क्रममा थाहा भयो ऊ पनि मेरै गृहजिल्लाकी चेली रहिछ । उसको श्रीमान् नेपाल प्रहरी जवान रहेछ । उसको साना दुईटा छोरा छोरी रहेछन् । यसो भन्दै उसले त्यो सानी बच्चीलाई घाममा सुताएर मजाले तेल लगाई दिई । मैले रमाइलो मानेर हेरिरहेँ ।
“के गर्नु मिस ! बुढोको तलव जोगाउनका लागि मैले पनि अलि–अलि सक्दो काम गर्नुपर्‍यो भनेर यस्तै आफूले जानेको घरको काम गर्ने गर्छु । फेरि फुच्चेको स्कुल फिस पनि तिर्नुपर्छ । पुलिसको तलव जाबो कति हुन्छ र । यो घरमा बस्दा भाडा तिर्नु पर्दैन त्यतै वचत हुन्छ, खाना पनि मलाई पुग्ने दिन्छन् रे, अरु दुईटा घरमा पनि भाडा माझ्ने लुगा धुने र घर पुछिने काम गर्छु । हजूरलाई नि काम गर्न गाह्रो छ भने मलाई ‘गर’ भने हुन्छ म गर्दिन्छु’ । नानीका ढाडमा तेल घस्दै ऊ बोलिरही ।
उसको हाउभाउ बिचार गर्दा मलाई ऊ एकदम स्पष्टवक्ता जस्तो लाग्यो । यसरी नै दिनप्रति दिन ऊ मसँग नजिकिँदै गई । दशैँ आउन लागेको समय थियो । त्यो जस्ताको छानो चिसिन थालिसकेको थियो । त्यसले अरुलाई भन्दा पनि त्यो सानी दूधे नानीलाई असर गर्न थालिसकेको थियो । चिसोले नानीलाई नराम्ररी आक्रमण गर्‍यो । नानी जतिबेलै रुन मात्र थाली । उसलाई घरधन्दाको चटारोले नानी समाएर दुध चुसाउने फुर्सद हुन छोड्यो । उसको त्यति राम्रो ज्यान दिनप्रति दिन सुकेर त्यान्द्रो जस्तै भयो । कलकलाउँदो अनुहारमा चाउरीका रेखा स्पष्ट देखिन थाले ।
उसले एक दिन मसँग दुखेसो पोख्दै भनी, “बेकार आएछु म यहाँ । छोराछोरी नि बिस्याहार भए । म पनि सुकेर यस्ती भएँ । घरबेटीहरूले दिएको दुई गाँस भातले मेरो यो हालत भयो । सबै काम गर्न लगाएपछि त टन्न पेटभर खाना दिनु नि ! यिनीहरूले दिएको एक डल्लो भात त मलाई हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै हुन्छ । त्यही पनि सबैले खाइसकेपछि उब्रिएको चिसो तरकारी पनि सबै राम्रो/राम्रो छानीछानी खाएर अलिकति राखेको हुन्छ । मरिमरि मीठो बनाएर मासु पकाइदिन्छु । त्यसको त बास्ना मात्र मेरो भागमा पर्छ । लोग्ने पनि मेरो त उस्तै छ । केही दुःख पोख्यो भने उल्टै कुटाइ खानुपर्छ । अर्की ल्याउँछु भनेर धम्क्याउँछ । तलव पनि सबै मासेर सक्छ । तास खेल्छ ।रक्सी खान्छ । उसले तलव जोगाउनु हो भने मैले यसरी दुःख गरिरहनु पर्ने थिएन । यी छोराछोरीलाई धेरै पढाउन सक्छु कि भनेर मैले यो दुःख बेसाएको नत्र त गाउँमै बस्दा मलाई आनन्द थियो ।”
उसको फतफत सुनेर नरमाइलो लाग्यो । खानेकुरामा त्यसरी विभेद गर्छन् भन्ने मैले कहिल्यै सोचेकी थिइनँ । म उनीहरूलाई भौतिक सुख सुविधाले मात्र होइन विचारले पनि धेरै समृद्ध र सम्पन्न होलान् भन्ने ठान्थेँ । त्यस्तै उसको श्रीमान् नेपाल प्रहरीमा जागिरे, उसको हालत त्यस्तो, तामाका मूनाजस्ता छोराछोरीको बिजोक सम्झँदा मेरो मन भित्रबाट चस्केर आयो । उसको एकोहोरो गन्थन सुनिरहेँ । म केही बोलिनँ ।
मेरो कोठामा मीठो चोखो पकाएको बेला सधैँ उसलाई पनि एक भाग लगाउन थालेँ । दिउँसो घरमा बसेको दिन खजा पनि उसलाई बोलाएर दिने गरेँ । उसको छोराको बेलुकाको खाना प्रायः हामीसँगै हुन्थ्यो । ऊ सानी नानी च्यापेर कोठामा फर्कदा कम्तीमा १० बजिसकेको हुन्थ्यो । ऊ यसरी नै हामीसँग नजिकँदै गई । ऊ नानी सुताएर काममा जाँदा हामीलाई नानी हेर्दिनु भनेर जान्थी । नानी उठेर रुन लागेपछि उठाएर घामको न्यानोमा म राखिदिन्थेँ । असाध्यै जाडो बढेको थियो । त्यो जस्ताको छानो चिसिएर टहराको वातावरण पनि असाध्यै चिसो थियो । बच्चीलाई मेरै कोठामा ल्याएर हिटरमा सेकाउने काम पनि मैले गरेँ । दाउरा किनेर सबै जना भएर बाहिर आगो बालेर ताप्यौँ । त्यसले पनि उसलाई धेरै राहत मिल्यो ।
न्यानो हुने उपचार जति गरे पनि काठमाडौँको पुस, माघको ठण्डीले त्यो सानी नानीलाई गाँज्न छोडेन । ऊ एकोहोरो बिरामी भइरही । उसलाई कहिले रुघाखोकी ज्वरोले सताउथ्यो भने कहिले झाडा पखाला जस्तो एकदमै नथामिने पातलो दिसा सलसली बग्थ्यो । एकपछि अर्को विरामीले बच्ची सुकेर त्यान्द्रो जस्ती भई भने ऊ पनि नानीका पीरले झनै जीर्ण बन्दै गई । उसको लोग्नेको नाकमुख देख्न छोडियो । उसले फोन गरेर धेरै बोलाई आफू र बच्ची दुवै विरामी भएको कुरा पनि बताई तर ऊ आएन । ड्युटी दिनरातको छ, आउन मिल्दैन भनेर ऊ पन्छिइरह्यो ।
औषधी उपचार गर्ने खर्च नभएपछि उसको त्यस्तो हालत हेरिरहनु भन्दा उपचार खर्च उसका हातमा हामीले नै राखिदियौँ । ऊ रुँदै भन्दै थिई, “धेरै गुन लगाउनु भयो । पछि लोग्नेले तलव ल्याएपछि म तिर्छु । मेरो भाग्य रहेछ भने मेरी छोरी बाँच्छे, नभए मर्छे जे भए पनि एकचोटी डक्टरकोमा चाहिँ लैजान्छु ।” त्यसैदिन उसको लोग्नेको फोन नम्बर मागेर हामीले नै फोन गरेर उसलई घरमा बोलायौँ । लोग्ने आएपछि नानीको उपचार भयो । विस्तारै ठीक हुँदै गयो । ऊ पनि सामान्य अवस्थामा आई ।
बिस्तारै चिसो पनि घट्दै गयो । वातावरण पनि सहज हुँदै गयो । तर उसको काम गराइमा जोतिनु पर्ने अवस्थामा सहजपन कहिल्यै आएन । एकपछि अर्को हुँदै थपिंदै गएका घरका कामभन्दासँग उसले पन्जा लडाउँदै गई । चित्त नबुझेको कुरामा कुनै बेला फुर्सद भयो भने मसँगै दुखेसो पोख्न आउँथी । उसलाई मन हल्का हुन्छ भन्ने बिचारले म पनि उसका गुनासाहरू सुनिदिन्थेँ ।
उसकी नानी नौ महिना लागिसकेकी थिई । उपचार पाएपछि उसको तौल पनि राम्ररी बढेको थियो । म त उसलाई उचाल्न नसक्ने भएकी थिएँ । किनभने म पनि आठ महिनाकी गर्भवती थिएँ । सुरु सुरुका दिनमा मैले उसकी नानी बोकेर डुलाएर उसलाई काम गर्न सहज बनाउँथे । तर आजभोलि आफ्नै शरीरको अप्ठ्यारोपनले गर्दा मैले उसकी नानी बोक्न, खेलाउन छोडेको एकडेढ महिना नै भइसकेको थियो ।
चार–पाँच दिन अघिदेखि नै मैले उसलाई राम्ररी भेटेकी थिइनँ । कामको चटारोले होला ऊ पनि मेरो कोठामा आएकी थिइन । म पनि सन्चो नभएर कोठाबाट बाहिर निस्किएकी थिइनँ । हिजो दिउँसो ऊ नानी लिएर मेरो कोठामा आई । एक छिन नानी भुल्याइदिनु न मिस ! म घरबेटीका लुगा धुइदिन्छु । २/३ घन्टा लाग्छ होला भन्दै थिई । मैले आफूलाई बिसन्चो भएको, खाना केही नखाएको कुरा गर्दै नानी उचालेर बोक्न सक्दिनँ भनेँ । उसले पनि आफ्नी नानी बिरामी भएको र बिहान फुक्ने मान्छे बोलाएर फुकेपछि अलि ठीक भएको कुरा गरी । नानी पिठ्यूमा बाँधेर भए पनि कपडा धुनु पर्‍यो । के गर्नु हजूरलाई नि सन्चो रहेनछ भन्दै ऊ बाहिरिई । म केहीबेर आराम गरेर कोठा बाहिर निस्किएँ । मधुरो घाम लागिरहेको थियो । एक छिन घाम ताप्दै म बाहिरै बसेँ । घरबेटी बुबा आफ्नो मोटर पुछिरहेका थिए । उनले मलाई आराम भए नभएको जानकारी मागेर यस्तो बेलामा आफ्नो ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरे ।
“अमेरिकामा बस्ने पाहुनाहरू आउनु भएको छ । आफू अमेरिका जाँदा बस्ने ठाउँ पनि उहाँहरूकैमा हो । त्यसैले नेपाल आएको बेला त आफूले सकेको स्वागत सत्कार त गर्नै पर्‍यो नि ! त्यही भएर आज खाना खाने गरी आउनु भएको । अब दुईटा मोटर लिएर घुमाउन लानुछ” भन्ने कुरा घरबेटी बा’ले मसँग भनी सक्न नपाउँदै एउटा ठूलो सम्भ्रान्त जस्तो देखिने जत्था घरको माथिल्लो तलाबाट हामी बसेको आँगनमा आइपुग्यो ।
त्यो हुलमा मैले घरबेटी आमा र उहाँका दुई जना छोरी बुहारीलाई मात्र चिनेँ । अरु अपरिचित नै थिए । अलि गर्मी भएकोले म कोठाभित्र पस्न लागेकी थिएँ । घरबेटी आमा परबाट बोल्दै थिइन् “ए ! तपाईलाई एउटा कुरा भनौँ भन्या थियो ।”
म ढोकै छेउ टक्क अडिएँ, “के कुरा भन्नोस् न !” उनी म तिर फटाफट आइन् । उनको अनुहार खुसी भएको हो कि रिसाएको हो । अरु बेला पनि मलाई छुट्याउन गाह्रो पथ्र्यो । हिजो पनि त्यस्तै भयो । आधा हाँसो र आधा रिस सहितको मुहार मेरो नजिकै आइपुग्यो । नजिकै आएर उनले भनिन्– “तपाईको पेटमा भएको बच्चा छोरा हो ?” त्यो हाम्रो घरमा काम गर्नेकी नानी अबदेखि तपाईले नहेर्दिनु, नबोलाइदिनु है ! त्यो बच्चीलाई तपाईको ‘रुन्चे’ लागेको हुनुपर्छ । विचरी त्यसले दिनैपिच्छे धामी बोलाउनुपर्दा असाध्यै दुःख पाई । त्यो नानी पनि रोएको रोएकै गर्छे । ल ! आजैदेखि त्यसलाई नछुइदिनु होला । त्यो बच्ची रोएकोले हामीलाई पनि असाध्यै “डिस्टर्व” भएको छ क्या !”
उनको त्यो भुटेको हाँडीमा मकै पड्किएजस्तो आवाजले म स्तब्ध भएँ । पनि भएभरको साहस बटुलेर भनेँ– “म्याडम, छोरा हो कि छोरी हो ? हामीले हेरेका छैनौँ, कसरी त्यस्तो हुन्छ र ?”
“पक्कै छोरा नै हुनुपर्छ ।” उनले चोर औँलो ठड्याउँदै भनिन्– “नत्र त्यो फुच्ची किन त्यसरी रुन्छे त ? उसलाई भन्न अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर मैले नै भनिदिएकी हुँ । अबदेखि त्यो नानीलाई नछुइदिनु नि !”
‘हुन्छ’ को सङ्केत सूचक टाउको हल्लाएर म कोठाभित्र छिरेँ । भाउन्न भएर ढल्छु कि जस्तो लाग्यो । नेपालको शिक्षित, आधुनिक र सम्भ्रान्त भन्न रुचाउने महिलाको विचार देखेर आफ्नो संस्कार, संस्कृति र रीतिरिवाजलाई मनमनै धिक्कारेँ । ए भगवान् ! म माथि यत्रो प्रहार भए पनि मेरो गर्भमा रहेको शिशुलाई कुनै चोर नपरोस है । यो कुरा भन्दै भगवान्सँग प्रार्थना गरेँ । त्यही हिजोको कुराले रातभर राम्ररी निद्रा परेन ।
यस्तै कुरा सोचेर झ्याल बाहिरतिर टोल्लाउँदै गर्दा त्यो बच्ची पनि बिउँझिएर रुन लागी । सधैँ जस्तो हो भने म उसलाई लिन कोठा बाहिर पुगिसक्थेँ । तर आज उसलाई झ्यालको सिसाबाट हेर्न पनि मलाई राम्ररी आँट आएको छैन । कसैले देखिरहेको पो छ कि जस्तो एक खालको अज्ञात डर मेरो मनमा लागिरहेको छ ।
बच्ची सायद मेरै प्रतिक्षा गर्दै रोइरहेकी होली । सधैँ यति रोइसक्दा आउँथी तर आज किन आइनँ भन्ने त्यसको अवोध बाल मनले सोचिरहेको छ होला जस्तो मलाई लागिरह्यो । ऊ झन्–झन् चर्को आवाज निकालेर रुँदै थिई । म उसको चर्तिकला मूकदर्शक भएर हेरिरहेँ । उसलाई सुताएको खाट अग्लो थियो । त्यो चकचके नानी बामे सर्दै मैले हेर्दा हेर्दै खाटबाट डङ्ग्रङ्ग्रै लडी । टाउको नराम्ररी भुइँमा ठोकियो । ऊ चिच्याइ–चिच्याइ रोइरहेकी छ । टाउको नराम्ररी ठोकिएको छ । तर म किंकर्तव्यविमूढ भएर झ्यालबाट हेरिरहेकी छु । बच्चीले पनि सायद मलाई सम्झिरहेकी छ होला । तर म भने हिजोको चोर औँला ठड्याएर दिएको कडा चेतावनी सम्झेर दोधारमा उभिइरहेकी छु । मन पग्लेर नानीका आँसुसँगै तपतप चुहिरहेको छ । म के गरौँ ? बच्चीलाई उठाउन जाउँ कि नजाऊँ ?